साहोले रोक्न सकेन छिछोरेलाई, बलिउड बक्स अफिसमा श्रद्धा कपूरको अर्को फिल्मको उत्कृष्ट प्रदर्शन - Everest Dainik - News from Nepal
साहोले रोक्न सकेन छिछोरेलाई, बलिउड बक्स अफिसमा श्रद्धा कपूरको अर्को फिल्मको उत्कृष्ट प्रदर्शन
काठमाडौँ, प्रभास र श्रद्धा कपूर अभिनित चलचित्र साहोको चेपुवामा पर्ने ठानिएको श्रद्धा कपूरको नयाँ चलचित्र छिछोरे बक्स अफिसमा निकै बलियो भएर देखिएको छ। रिलिज भएको दिन शुक्रवार ७.३२ करोड कमाएको यस चलचित्रको कमाइ शनिबार १२.२५ करोड र आइतबार १६.४१ करोड रहेको थियो।
फिल्मले सोमबार ८. १० करोड र मंगलबार १०.०५ करोड कमाएको छ। रिलिज भएको पाँचौं दिनसम्ममा चलचित्रले ५४. १३ करोड कमाइसकेको छ। चलचित्रमा सुशान्तसिंह राजपूत र श्रद्धा कपूर लगायतको अभिनय रहेको छ।
हालका दिनहरूमा बलिउड चलचित्रहरूको ‘ट्रेण्ड’ विपरित यस चलचित्रले ओपनिङको दिनभन्दा हप्ताका अरु दिन बढी कमाएको छ। र्रिलिज भएको दिनको तुलनामा हप्ताका अन्य दिन बढी कमाइ गर्ने मामिलामा यस फिल्मले यस वर्ष रिलिज भएका दुइ चलचित्र उरी र कबीर सिंहको गति समातेको बताइएको छ।
याे पनि पढ्नुस कमाइ खस्के पनि साहोबाट प्रभास बने एक मात्र अखिल भारतीय सुपरस्टार
एडभान्स बुकिङमा निकै कम्जोर रहेको यस चलचित्रले पहिलो सप्ताहान्तमा राम्रो प्रदर्शन गरे २० देखि ३५ करोड कमाउने आकलन गरिएको थियो। फिल्मको पहिलो दिनको अवस्था हेर्दा केहीले यसलाई पनि महत्त्वाकांक्षी अनुमानको संज्ञा दिएका थिए।
दर्शकहरूबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएपछि दोस्रो दिनको कमाइमा निकै सुधार गरेको यस चलचित्रले आइतबारभने ओपनिङको दिनको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी कमाएर सबै अन्नुमानहरूलाई गलत साबित गरिदियो।
पहिलो सप्ताहान्तमा लगभग ३६ करोड कमाएको यस चलचित्रको कमाइमा सोमबार र मंगलबारपनि उल्लेख्य गिरावट नदेखिनुले यो चलचित्र लामो दौडको घोडा साबित हुने देखिन्छ।
जम्मा ७० करोडको लागतमा निर्माण भएको यस चलचित्रले पहिलो हप्ताभित्र आफ्नो लगानी असुल गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
छोएन साहोको आँधीले
भारतीय सिनेवृत्तमा पछिल्ला दिनहरूमा प्रभास श्रद्धा रहेको चलचित्र साहोको रहेको छ। निकै ठुलो लगानी (३ अर्ब ५० करोड भारु) लगानी रहेको उक्त चलचित्रले भारतभरि निकै आक्रामक व्यापार गरिरहेको छ। चलचित्रले रिलिज भएको १० दिनमै विश्वभरिबाट ४ सय करोडभन्दा बढी को कमाइ गरिसकेको छ भने दोस्रो हप्तामा पनि चलचित्रको पकड निकै बलियो रहेको छ।
समीक्षकहरूद्वारा मन नपराइएको साहोलाई जनताले मन पराइदिएपछि कसैको केही लागेन र चलचित्रले हिन्दी संसकरणबाट मात्रै १३३ करोडभन्दा बढी कमाइसकेको छ। तर रिलिज हुनु पहिलेदेखि नै बाहुबली २ सँग तुलना गरिँदै आएको यस चलचित्रको दोस्रो हप्ताको कमाइमा भने निकै गिरावट आएको छ।
याे पनि पढ्नुस प्रभासको नयाँ चलचित्र 'साहो' प्रदर्शनका लागि तयार, कस्तो छ दमखम?
साहोले छिछोरेको कमाइमा असर पार्न सक्ने आकलन गरिएको भनिए पनि चलचित्रले अप्ठ्यारा दिनहरूमा दर्शक तान्न सकेको देख्दा यसले हप्ता भरिमा राम्रो व्यापार गर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।
हालका दिनहरूमा सुरुका तीन दिन आक्रामक व्यापार गर्ने बलिउड चलचित्रहरू पनि सोमबार र मंगलबार आउँदा आउँदा शिथिल भैहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। छिछोरेको प्रदर्शनले यस ‘ट्रेण्ड ‘लाई गलत साबित गरिदिएको छ।
ट्याग्स: Saaho, छिछाेरे, श्रद्धा कपूर, साहाे